Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo loo dhaarshay xubinimada baarlamaanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo loo dhaarshay xubinimada baarlamaanka
Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Sabti loo dhaarshay xubinimada baarlamaanka dalka.
Xasan Shiikh lama dooran balse dastuurka ayaa u ogolaanaya in uu kamid noqdo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Qodobka 64-aad ee datuurka federaalka Soomaaliya farqadiisa 4-aad ayaa tilmaamaya in qof walba oo noqda madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu noqon doono xubin kamid ah baarlamaanka Soomaaliya kadib marka uu ka tago xafiiska madaxweynenimada.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa tartankii doorashadii madaxweynaha Soomaaliya ee dhacday 8-dii bishii lasoo dhaafay ee Febaraayo, waxaa kaga adkaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
June 29, 2017 Ciidamada dowladda Soomaaliya oo maleeshiyada Al-Shabaab kala wareegay deegaano kuyaala gobolka Gedo